एलईडीको साथ बढ्नको लागि उत्तम अभ्यासहरू - समाचार - लाइट अन
कसरी र कहाँ मेरो बत्ती स्थिति
Lighting is one of the most important factors in indoor horticulture. Optimal light level for flowering is somewhere between 750 and 1,000 µMoles/m2/s (PPFD). Make sure that the light from your fixture is providing this optimal level of light as evenly as possible throughout your canopy. This is particularly important with LED lighting because they are more directional (depending on the quality of optics used) and are also more prone to shading.
तपाईंको एलईडी बत्ती वनस्पति चक्रको बखतमा तपाईंको बोटबिरुवाबाट â³â to मा र २omâ € ³ देखि âââ € blo मा खिलिएको चक्रको अवधिमा राख्नुपर्दछ। सानो बत्तीहरू अलि नजिकै राख्न सकिन्छ। तर कृपया नोट गर्नुहोस् कि चन्दवाबाट नजिकको २ââ ble ब्लीचिंग वा स्टन्ट ग्रोथ हुन सक्छ, विशेष गरी ठूला पावर बत्तीहरूसहित, अर्थात् १००० वाट।
यि प्रविधिहरूले फूल फुल्ने छत गहिराइ विकास गर्न मद्दत गर्दछ १२€ â â â “१ââ between सबै फूल साइटहरू सकेसम्म प्रकाशमा पर्दा। यो सिफारिश गरिन्छ कि यस स्तर मुनिका फूलहरू (यदि कुनै छ भने) Bloom (फूल फुल्ने) चक्रको दुई हप्ताको अन्तमा छाँट्नु पर्छ। यसले बोट उर्जालाई उच्च, अधिक इष्टतम फ्लावर शीर्षहरूमा पुश गर्न मद्दत गर्दछ। यस सेक्सन माथिको कुनै ठूलो फ्यान पातहरू बिस्तारै हटाइनु पर्दछ, विशेष गरी यदि तिनीहरू तल्लो फूल साइटहरू छाँटिरहेका छन्।
चार हप्ता Bloom ले यो सिफारिश गरिन्छ कि तपाईले सबै ठूला फ्यान पातहरू हटाउनको लागि फूल फुल्ने साइटहरूलाई अधिकतम अबाधित जोखिममा प्रकाश पाउन अनुमति दिनुहोस्। यस चरणमा, तपाईंको चन्दवाइ सकेसम्म पनि हुनुपर्दछ र माथिल्लो स्रोत स्रोतबाट २€â â â€ââ € be को आसपास हुनुपर्दछ। तपाईंको छतमा जति अधिक सुसंगत पहुँच हुन्छ, त्यसले प्रकाशको अवस्थालाई उत्तम पार्दछ।
What Is an Optimal Temperature For Indoor Growing With LEDs?
तापमान स्थलीय बिरुवाहरूमा एक चयापचय नियामक हो। आधारभूत नियम, यो तातो छ, तिनीहरू छिटो बढ्दछन्। तापक्रम / बिरुवाको मेटाबोलिज्म बढ्दै जाँदा, बिरूवाहरूले अधिक पानी, सीओ २, अक्सिजन (केवल जरा मात्र), र पोषक तत्व थोरको अनुपात आवश्यक गर्दछ। बोट मात्र कमजोर लि as्कको रूपमा छिटो बढ्नेछ। अर्को शब्दहरुमा, यदि यी मध्ये कुनै पनि इनपुट प्यारामिटर सीमित छ भने, बोट वृद्धिले बाँकी प्यारामिटरको स्तरलाई ध्यान नदिई सुस्त हुनेछ।
Degrees 78 डिग्री फरेनहाइट (F 78 एफ) वायुमंडलीय CO2 स्तरमा (P 360०PPM) प्रायः सबै बिरुवाहरुका लागि व्यापक रूपले स्वीकृत इष्टतम तापमान हो। यो संख्या वास्तवमा भ्रामक छ, किनकि यो सिफारिश सूर्यको किरण वा HID प्रकाशको साथ गरिएको परीक्षणमा आधारित छ, दुबैमा इन्फ्रारेड प्रकाशको उच्च स्तर (IR) छ।
प्रत्येक बढ्ने वातावरण अनौंठो हुन्छ, र व्यक्तिगत अनुभवको विकल्प छैन। हामी तपाईंलाई कम सुरु गर्न सिफारिश गर्दछौं, अर्थात् F 83F-FF एफ एयर टेम्प, र क्रमिक वृद्धिका मार्फत बिस्तारै तपाईंको बाटोमा काम गर्नुहोस्। विशाल नोटहरू लिँदा फरकहरू बढ्नदेखि बढ्नको लागि बढि फरक पार्नेछ, तपाईंसँग पक्का निश्चित जवाफ हुनेछ कि तपाईंको प्रयास के हो र कहाँ भुक्तानी गरिएको छैन। पौष्टिक / न्युमिटी - Nut "कम पोषक प्रयोग गर्नुहोस्
कति पोषक तत्वहरू र उचित आर्द्रता स्तरहरू प्रयोग गर्ने
Light On Technology can provide more profession LED grow light solutions as below. Please feel free to contact us.
अघिल्लो:लाइट अन टेक्नोलोजीले मोडेल एस एलईडी प्रकाश बृद्धिमा धेरै सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त गर्‍यो
अर्को:मेरो बृद्धि सेटअपका लागि बिरूवाहरूको सहि संख्या के हो?